VACC2000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၂၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 2000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC2000
VACC2000 Purified water filtration system is directly imported from the USA. The product meets ISO 9001:2015 standards - the world's best-known quality management standard currently.
VACC2000 ရေသန့်စစ်ထုတ် ကိရိယာ စနစ်ကို USA မှ တိုက်ရိုက် တင်သွင်းပါတယ်။ ဒီစက်က ကမ္ဘာ့လူသိအများဆုံး စံချိန်စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
The increasing demands for pure water for health protection and disease prevention has opened up great opportunities for many organizations and individuals both domestically and internationally.
ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့နဲ့ ရောဂါဝင်ရောက်မှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ရေသန့်တွေအပေါ် မှီတည်လာကြတာဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
VACC2000 2000LPH Water filtration system is directly imported and distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company. Are you an owner ofahotel chain or tourism agent who buys pure water from other companies but cannot sure about the water quality? Are you wondering whether you should produce pure water by your shelf?
Ensuring pure water quality will help to build customers’ trust and increase the competition for the enterprises. Our VACC2000 Purified water filtration system will beaperfect choice for you to achieve this. With its sophisticated design, the VACC2000 Purified water filtration system will surely suit the diverse demands of the customers.
VACC2000 2000LPH ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို Viet An မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ဖြန့်ချီပါတယ်။ သင်က ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဒါမှမဟုတ် ခရီးသွားအေဂျင်စီ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေဆီက ရေသန့်မှာယူနေရကာ ရေရဲ့ အရည်အသွေးကို စိတ်မချဖြစ်နေရပါသလား? ရေသန့်ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သင့်တယ်လို့ မထင်ဘူးလား? ရေသန့်စစ်ကြောင်း သေချာမှုက ဖောက်သည်တွေဆီမှ ယုံကြည်မှုလည်း ရနိုင်သလို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်တော့ VACC2000 စက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် VACC2000 စက်က ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အကြိုက်နဲ့ တထပ်တည်း ကျမှာ အသေအချာပါပဲ။
Purified water is an essential product for human health. However, for the immediate benefits, many manufacturers still ignore this and provide their customers with an unsecured water supply.
လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ရေသန့်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူအများစုက ဝယ်ယူသူတွေကို လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေပဲ ပေးနေပါတယ်။
Now with our VACC2000 Purified water filtration system, you can totally feel secure about the water quality. You can filter the water from different sources and change it to purified water with high quality, ensuring food hygiene and safety. In addition, you can use this purified water for cube ice making, serving an increasing demand for refreshments of the customers.
ယခုအခါမှာတော့ VACC2000 ရေစစ်ထုတ်စနစ်နဲ့ ရေရဲ့ အရည်အသွေးကို လုံးဝ ယုံကြည်မှုရှိစေမှာပါ။ သင်က ဘယ်လိုရေအရင်းအမြစ်ကိုမဆို ရေသန့်ပြောင်းနိုင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှုလည်း ရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရေသန့်နဲ့ ရေခဲထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
5 reasons why you should chooseaVACC2000 Purified water filtration system
VACC2000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဘာကြောင့်ရွေးသင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ၅ ခု
Produce qualified pure water with high capacity
With the application of American technology with the totally automatic treatment process, the VACC2000 Purified water filtration system can be used to filter the water atahigh speed of 2,000l/hour. There isasmart control panel to automatically stop in case of abnormal incidents. With the filter slot size at only 0,0001 micrometers of the RO membrane system andadouble bactericidal system and bacteria filter, the purified water is ensured to meet the QCVN 6-1: 2010/BYT standard of the Ministry of Health.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အဆင့်မီတဲ့ ရေသန့်ကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း
အော်တို ပြုပြင်ပေးတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာကြောင့် VACC2000 စက်ကို တစ်နာရီမှာ ၂၀၀၀ လီတာ ရေစစ်ထုတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မူမမှန်မှု ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ အော်တိုရပ်သွားပေးတဲ့ စမတ်ကျတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင် ပါရှိပါတယ်။ ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားရှိတဲ့ RO အလွှာပါးစနစ်နဲ့ ဘက်တီးရီးယားကို နှစ်ဆစစ်ထုတ်ပေးသော စနစ်တို့ကြောင့် သန့်စင်ထားတဲ့ရေက ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1: 2010/BYT စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
VACC2000 hasaspace-saving design along with composite material, making it resistant to saltwater and brackish water. Therefore, the machine is suitable for water treatment in coastal areas, rural areas with long shelf life The price of this machine is reasonable, suiting diverse demands of the customers in different areas, including the urban and rural areas.
VACC2000 ကို နေရာချွေတာတဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် ရေငန်၊ ပင်လယ်ရေတွေကို ခုခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်က ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလည်း ကြာရှည်ခံပါတယ်။ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာပြီး မြို့ပေါ် ကျေးလက်ဒေသမှ ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
VACC2000 Purified water filtration system is produced according to American standard with high-quality material, satisfying ISO 9001:2015 standards. The product has been recognized an exclusive brand No. 250970 under the brand name of USApec by the National Office Of Intellectual Property Of Vietnam.
VACC2000 ရေသန့်စစ်ထုတ် ကိရိယာကို အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ အမေရိကန် နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ USApec ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ဖြင့် မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၇၀ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။
The water filtration process is fast, closed with less noise, and does not affect the surrounding environment, making it environment-friendly.
ရေစစ်ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းက မြန်ပြီး ဆူညံမှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေပါဘူး
Witha3 gate mechanical valve system integrated, it is easy to control to wash the filter tank and increase the machine’s shelf life. This is also the cheapest product in the market. It is from 5-10 million dongs cheaper than the water filtration systems using the automatic valve.
၃ ဂိတ်စနစ် ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် ရေတိုင်ကီကို ဆေးကြောရတာ လွယ်ကူပြီး စက်ရဲ့ ထားသိုနိုင်မှုသက်တမ်း ကြာရှည်စေပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာ ဈေးအတန်ဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုအဆို့တွေကို သုံးတဲ့ စနစ်တွေထက် ဗီယက်နမ်ငွေ ၅-၁၀ သန်း ဈေးသက်သာပါတယ်။
For more details on the quotation for Viet An’s products, go to https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc
ပိုမိုသိရှိဖို့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
It is very easy to buyawater filtration system from many different brand names. However, it is not so easy to findareputable brand withaclear origin. Despite this fact, to ensure the water quality as well as the shelf life of the machines, it is important to strictly follow below instructions for proper use:
တံဆိပ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ရေစစ်ထုတ်စနစ်တွေကို ဝယ်ယူဖို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူလအစတည်းက နာမည်ကြီးပြီးသား တံဆိပ်ကို ဝယ်ယူဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ရေရဲ့အရည်အသွေးရော စက်ရဲ့ ကြာရှည်ခံမှုရောကို သေချာစေဖို့ လမ်းညွှန်မှုတွေကို စနစ်တကျလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Keep in mind to clearly define the water intakes to find outarelevant filtration system. Ensureastable and abundant source of water for the filtration process.
သင့်တော်တဲ့ ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကို ရှာတွေ့ဖို့ ရေအရင်းအမြစ်ကို သေချာသတ်မှတ်ပါ။ ရေစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တည်ငြိမ်ပြီး ပေါများတဲ့ရေအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
Ensureastable 3-phase power supply
တည်ငြိမ်သော ၃ ဆင့် ပါဝါပေးပို့မှု
Read the manual carefully before operating the system.
စနစ်ကို စတင်မလုပ်ဆောင်ခင် လမ်းညွှန်ကို သေချာဖတ်ပါ
Properly wash the filter cartridge when the water reaches required, amount, adjust the3gate valve gently to increase the machine’s durability.
ရေက လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကို ရောက်တဲ့အခါ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်ကို ဆေးကြောပါ။ စက်က ပိုပြီး ကြာရှည်ခံအောင် ၃ ဂိတ်အဆို့ကို ညှိပေးပါ။
Do not disassemble the components in the purified water production line in any abnormal cases withoutaclear understanding of the operational mechanism.
During your operation, if any abnormal cases arise, just call us at 19006013 forafree consultation.
စက်ပစ္စည်းပိုင်းကို မကျွမ်းကျင်ဘဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှ စက်အစိတ်အပိုင်းတွေကို မဖြုတ်ပါနဲ့။ လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း မူမမှန်မှု တွေ့ပြီဆိုရင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ ၁၉၀၀၆၀၁၃ ကို ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။
3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine VAQGF 150
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း:၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၁၅၀ ကို တစ်နာရီတည်းနှင့် ဖြည့်နိုင်ပါတယ်
အာမခံချက်: ၁၂ လ (၁ နှစ်)
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်2pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ2pc VA/ USApec
12 Auto valve အော်တိုအဆို့	1 1 pc VA/ USApec
14 20 Filter Cartridge ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်7pc VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံး စစ်ထုတ်ကိရိယာ အိမ့်1 pc VA/ USApec
27 20 Filter housing ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်2pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 2000 2000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်